FJKM Ankadindramamy Fahazavana » Fampianaram-pinoana
Mafana fo amin’ny fanompoana ny Tompo
Natao ny 07 Nov 2014, Pasitera: RAKOTONDRASOA Harijaona A.
Tsy zavatra, na olona eto no tompoina fa ny Tompo. Ny olom-boavonjy ihany koa no tarihina hiroso amin’izany tena fanompoana iznay. Araka izany dia Mpino kristiana mametraka ho laharam-pahamehana ny fanompoana ny Tompo no tanjona araka izany. Ialana koa anefa ny fanatanterahana asa fanompoana
MAMONJY AMIN’NY FAHAFATESANA NY TOMPO
Natao ny 05 Avr 2014, Pasitera: Atoa RAKOTONDRASOA Harijaona Andriatsarafara, Mpitandrina
Mamonjy amin'ny fahafatesana ny Tompo. Izany no lohahevitra dinihintsika FJKM amin'ity volana Aprily 2014 ity. Volana Aprily hankalazantsika ny Paska ilay ahatsiarovana ny nitsanganan'ny Tompo tamin'ny maty. Nandresy ny fahafatesana Izy mba ho famonjena antsika amin'ny endrim-pahafatesana samihafa